Qaraxyo khasaaro geystay oo ka dhacay Balcad | KEYDMEDIA ONLINE
Qaraxyo khasaaro geystay oo ka dhacay Balcad
Labada qarax oo ahaa miino ayaa ka dhacay afaafka hore ee xarunta maamulka degmada.
BALCAD, Soomaaliya - Ugu yaraan saddex qof oo uu ku jiro Sarkaal boolis ayaa ku dhintay labo qarax oo Maanta ka dhacay afaafka hore ee xarunta maamulka Degmada Balcad, oo qiyaastii 30-KM u jirta Muqdisho.
Lix qof oo kale, oo shacab iyo askar isagu jira ayaa ku dhaawacmey qaraxyadda, oo lagu eedeeyay inay ka dambeyso Kooxda Al-Shabaab oo mudooyinkii dambe xoojisay weerarada xili dalka uu ku jiro marxaladda kala-guurka.
Xaaladda Balcad ayaa kacsan, waxaana socda howlgallo ay Ciidamada dowladda sameynayaan si ay uga hortagaan weeraro kale oo ay fuliyaan xubno katirsan Al-Shabaab oo gudaha ku jira.
Maalintii shalay, 5 qof oo labo Turki ahaayeen ayaa ku geeriyoodey qarax is-miidaamin ahaa oo ka dhacay inta u dhaxaysa Lafoole iyo Xaawo Cabdi, kaasoo lala eegtay shaqaalaha dhisaya jidka Muqdisho iyo Afgooye.
Al-Shabaab ayaa diiradda saareysa qaraxyada oo ah waxa kaliya ay awoodda inay sameyso, islamarkaana kusii jiri karto kadib markii dagaalka dhulka looga adkaadey oo magaalooyin badan laga saarey.
0 Comments Topics: qarax soomaaliya